Yangon Khuapi Cu Ral A Tho Taktak Ko Cang - Chin Eleven News
Yangon Khuapi Cu Ral A Tho Taktak Ko Cang
August 30, Yangon khuachung hmun5ah zinglei 5:00 in 6:00 kar ah bomb pehtlai in an puak hna tiah khuami nih an chim cio.
A puahnak hmun hi, Kamayut peng, Hledan lamtonnak, Insein peng Japan lam Junction, Paukdawa, BOC le Insein Buda tibantuk hmun5ah ahasi.THT
ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်က လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်က ဂျပန်လမ်း မီးပွိုင့်၊ ပေါက်တောဝ မီးပွိုင့်၊ BOC မီးပွိုင့်နဲ့ အင်းစိန်ဘူတာအနီး စတဲ့ နေရာ ငါးခုမှာ ဒီနေ့မနက် ၅ နာရီနဲ့ ၆ နာရီ၀န်းကျင်အချိန်တွေမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီး ပေါက်ကွဲမှုမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန် မီးခိုးတွေပေါ်ထွက်လာတာကို အဝေးက လှမ်းမြင်ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်မှာ စစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့သလို မနက် ၈ နာရီကစလို့ ရဲကားအကြီး နှစ်စီးနဲ့ ယာဉ်ထိန်းအပါအဝင် အင်အား ၃၀ လောက် ချထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ရှိ၊ မရှိကိုတော့ လတ်တလော မသိရသေးပါဘူး။#RFA
Relchap:Pha An peng ah KNLA Brigade (1) le rallokap kar kahdohnak ah ralhrang lei in minung3an thi, minung2nih hliam an tuar KNU – Tatung pengkomh Brigade(1), Pha An peng, Ta Kuang Bu khuakomh ah nihin zinglei ah Karen ralkap KNLA Brigade(1 ) le rallokap phu chung tel hna kar ah kahdohnakachuak, i rallokap lei in minung3an thi, minung2hliam an tuar tiah KNU lei nih an chim.
Nihin zinglei suimilam 7:00 Am hrawng ah Ta Kuang Bu khuakomh Mi Pung khua pawngaharak kai mi rallokap thazaang minung 20 hrawngasi mi hna cu KNLA Brigade (1) le KNDO hna i bawm in, an kah hiasi tiah KNU Ta Thung pengkhat Pha Ann peng Lutlai Saw Sandar Ting nihachim.
Rallokap lei in minung3an thi i, minung2nih hliam an tuar .Kanmah lei inahliam mi kan um lo.Mah kan i kah hnu in rallokap hna cu hnu ah an kir than,athi mi leahliam mi hna cu Swe Kun lei ah an kal pi tiah Padu Saw Sandar Ting nihachim.#KIC:TCP
CNA Ralkap Kan U Naupa Tuzing CNF/A Kong A Chim Mi Cu A Mak Taktak